जेन अस्टेन। उसको मृत्युको द्विवार्षिक। उसको अपरिहार्य कामहरू। | वर्तमान साहित्य
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | लेखकहरू, किताबहरु, नोभेला, रोमान्स उपन्यास
El 18 डी julio de 1817 जेन अस्टेनको मृत्यु भयो, जो शहरमा गाडियो विनचेस्टर। मसंग थियो 41 वर्ष र उसको जीवनले महत्त्वपूर्ण घटनाहरूको समीक्षा गरेन, तर उसले शुरुदेखि नै प्राप्त गर्यो राम्रो स्वागत र मान्यता आफ्नो काम गर्न। उनका उपन्यासहरू तिनीहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबिम्बित र वर्णन, विडंबना को एक स्पर्श संग, बुर्जुवा समाजको भावना र व्यवहार उहाँ बस्नुहुन्थ्यो।
समयको साथ यी उपन्यासहरू तिनीहरूको आकर्षण वा तिनीहरूको हराएको छैन आकर्षण र भावना को शक्ति. अविस्मरणीय कथाहरू र पात्रहरू कि हामी सबै पढेका छौं वा केहि समयमा देखेका छौं र त्यो हाम्रो चिनो लगाइएको छ बढी रोमान्टिक भावना। आज म समीक्षा गर्दछु सबैभन्दा आधारभूत काम उनको धेरै महान व्यक्तित्व को एक सानो श्रद्धांजलि को रूप मा।
1 गर्व र पूर्वाग्रह
2 भावना र संवेदनशीलता
4 मन्सफिल्ड पार्क
6 Northanger अबे
गर्व र पूर्वाग्रह
"यो एक सर्वव्यापी रूपमा स्वीकारिएको सत्य हो कि ठूलो भाग्य भएको प्रत्येक पुरुषलाई श्रीमती चाहिन्छ।" यो निर्धारण र वर्णनात्मक शुरुवात हो सबैभन्दा राम्रो सम्मान र सबैभन्दा प्रसिद्ध काम को सम्भवतः यसलाई लेख्न सुरु भयो 1796 तर यो प्रकाशित भएको थिएन 1813। यसमा अस्टेनले कथाको कथा बताउँछिन् श्रीमती बेनेटका पाँच छोरीहरू, जसको आफ्नो जीवनमा अरू कुनै लक्ष्य छैन राम्रो विवाह ती सबैको लागि। र उनीहरुका बदमाशहरुमा उनी दुई जना धनी युवाहरू रहेका छन्। बिंगले र प्रभु Darcy.
जेठी छोरी, जेन र श्री बिन्गलीको बीचमा पहिले नै सम्बन्ध छ जुन भविष्यको ठूलो भविष्य देखिन्छ तर श्री डार्सीको प्रभावमा यो सफल छैन। तर, को हस्तक्षेप एलिजाबेथ, दोस्रो छोरी, अन्तर्दृष्टि र केही विद्रोही, घटना को पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्दछ।
गर्व र पूर्वाग्रह यसमा अस्टेनको कामका सबै मौलिक थिमहरू छन्। को दमनकारी पारिवारिक वातावरण, विवाहको दबाब, वर्ग भिन्नता, गरीबी र नाजुक संवेदनशीलता को भूमिको एक निर्धारित नायिका को, तर जो गलत छ।
पक्कै पनि यो भएको छ चलचित्रमा लगियो धेरै अवसरहरूमा, सबैभन्दा भर्खरको, भित्र 20o5। जो राइट द्वारा निर्देशित र निर्देशित कास्टको नेतृत्वमा Keira Knightley y म्याथ्यू म्याकफ्याडेन.
भावना र संवेदनशीलता
De 1811. उसको सबैभन्दा प्रसिद्ध कामहरू त्यो कथा बताउँछ ड्यासवुड बहिनीहरू, एलीनर र मारियान। तिनीहरू पूर्ण रूपमा फरक छन् किनकि भित्र एलिनोर प्रबल हुन्छ सामान्य अर्थ y Marianne एक महान द्वारा टाढा गरिएको छ संवेदनशीलता। र दुबै चरित्र र व्यवहारले उनीहरूको जोखिम बोक्छ।
एलीनर र मारियान आफ्नो आमा र सानी बहिनी मार्गरेटसँगै बस्छन्। आफ्नो बुबाको मृत्यु पछि, परिवारको हकदारता उनको सौतेनी भाइ, जोन ड्यासवुड, जसमा एक मात्र पुरुष वंश र पहिलो विवाहको छोरा थियो। त्यसैले परिवार ऊ प्रायः केहि पनि राख्दैन र देशको सानो घरमा सर्छ आफन्त द्वारा प्रस्ताव गरिएको। त्यहाँ ड्यासवुड बहिनीहरूले तीनजना मानिसहरूलाई भेट्नेछन्: एडवर्ड फेरा, सर जोन विलोबी र कर्नेल ब्रान्डन। र दुबै दुबै प्रेम र निराशा पाउनुहुनेछ। बीचमा, अधिक प्लट र गलतफहमी त्यो परिणाम प्रत्येक को लागी नेतृत्व गर्नेछ।
दुबै चलचित्र र टेलिभिजनमा धेरै पटक अनुकूलित गरियो, संस्करण सबै भन्दा सम्झना कि छ 1995एंग ली द्वारा, द्वारा एम्मा थामसन y केट विन्सलेट ड्यासवुड बहिनीहरू जस्तै।
मा पोष्ट गरिएको 1815, को कथा बताउँछ Emma वुडहाउस, एक बुद्धिमान तर खराब युवा महिला जो जिद्दी गर्दछ खेल तपाइँका सबै साथीहरुलाई। जब तपाईंको शासन, साथी र विश्वासयोग्य विवाह गर्न निर्णय, तपाईं आफ्नो जीवनमा वास्तविक शून्यता सामना गर्नुपर्नेछ। यसका लागि उनले आफूलाई समर्पण गर्छिन् कि अरूले पनि उहाँ जस्तो सोच्दछ जस्तो सिद्ध जीवन बिताउँदछन्।
तर उसका सबै कामहरू भावनात्मक हेरफेर तिनीहरूलाई धेरै वरिपरि सिर्जना गर्दछ tangles, गलतफहमी र भ्रम. एम्मा यो १ th औं शताब्दीको शुरुमा प्रान्तीय इ England्गल्यान्डको अर्को उत्कृष्ट चित्र हो।
अनुकूलित छ एक हास्य पनि र पक्कै पनि श्रृ series्खलाको रूपमा, मिनिस्ट्रीहरू र फिल्म संस्करणको रूपमा। शायद सबै भन्दा राम्रो ज्ञात को हो 1996संग Gwyneth Paltrow नायकको रूपमा।
De 1814, उपन्यास सबैभन्दा मानिन्छ जटिल, उदास र घने Austen द्वारा। कथा बताउँछ फेनी मूल्य, जो अझै पनि एक केटी छ उनका काकाहरूले उनलाई मन्स्टफील्ड पार्कमा उनीहरूको हवेलीमा लगे, गरिबी को जीवन देखि उनलाई बचाउन। त्यहाँ तपाईंले फुर्सत र शोधनको जीवनको आनन्द लिन सुरु गर्नुहुनेछ। तर त्यो हवेलीमा यो पनि लुकेको छ एक खतरनाक सत्य त्यो Fanny सामना गर्न सिक्नुपर्नेछ।
यो उपन्यास वर्णन गर्दछaआदेश र परिवार र समाजको आलोचना त्यो एक लजालु युवतीको आँखामा परिवर्तन हुँदैछ, केहि आकर्षकको लागि र अरूको लागि आकर्षणविना।
फेरी यो फिल्म र टेलिभिजनमा अनुकूलनको बिषय हो, उदाहरणका लागि १ 1999 XNUMX। फिल्म संस्करण con फ्रान्सेस O'Connor Fanny मूल्य रूपमा।
उसको थियो पछिल्लो उपन्यास जसले थोरै पछि लेख्न सुरू गर्यो एम्मा। यो कामको रूपमा प्रकाशित भयो १h१1818 मा मरणोपरान्त। जडान गर्दछ Northanger Abbey, किनभने दुबै एक वर्षमा दुई वर्ष पछि प्रकाशित भयो। र पनि किनभने दुबै कथाहरू देखा पर्दछन् स्नान, जसको स्पा जेन त्यस समयमा गए।
यो एक मात्र काम हो जुनaको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ प्रेम कथा। सबै अरूले जहिले पनि एक वा दुई जोडीको मोह बताउँछन् र नायकको विवाहको साथ समाप्त हुन्छन्, तर कथामा यो केवल एक मात्र हो जुन एसमा केन्द्रित हुन्छ।नायक एन्ने इलियटको भावना.
एन एक महिला हो संवेदनशील, बिरामी र underappreciated, जो, बर्ष पछि अस्वीकृत भएको त्यो मान्छेलाई उनी नराम्रो सल्लाह अनुसरण गर्न मन पराउँछन्, कसरी हेर्नुहोस् ऊ फेरि देखा पर्दछ उनको जीवनमा, धनी र सम्मानजनक तर अझै झेलिएको छ। त्यसो भए एनले प्रेमलाई अनुदान दिन हरेक सम्भव हुने छ दोस्रो अवसर। अवश्य पनि हामीसँग समयको सफल मनोरन्जन छ।
यसका लागी सिइन एक संस्करण मा बनेको थियो 1995 र लागि टेलीभिजन को एक श्रृंखला छन् 2007.
बीचमा लेखिएको 1798 र 1799, कथा बताउँछ क्याथरीन मोरल्याण्ड, गथिक उपन्यासहरूका एक उत्सुक पाठक, जसले ईसाबेला थोर्प जस्ता साथीहरूलाई भेट्न र नाच्नेमा समय बिताउँछिन्। क्याथरीन गर्न जोन थोर्पे यो दावी गर्दछन्, इसाबेला भाइ, र हेनरी टिलनी, एक युवा पादरी ठूलो प्रेम र इतिहास र साहित्य को लागी ज्ञान संग।
यसैले, टिल्नीले क्याथरिनलाई उनको बुबाको फार्ममा जान आमन्त्रित गर्‍यो, Northanger अबे। उनी यो आशा गर्दछन् कि यो अन्धकार, पुरानो, र रहस्य र कल्पनाले भरिएको छ, जस्तो उनले पढ्ने उपन्यासहरूमा जस्तै। त्यहाँ एउटा अनुकूलन लागि टेलीभिजन de 2007.
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » लेखकहरू » जेन अस्टेन। उसको मृत्युको द्विवार्षिक। उसको अपरिहार्य कामहरू।